नेपालको निकुञ्ज एवं आरक्ष सिमासार क्षेत्रका पानीचराको गणना सुरु - China Radio International
नेपालको निकुञ्ज एवं आरक्ष सिमासार क्षेत्रका पानीचराको गणना सुरु
(GMT+08:00) 2014-01-11 17:18:34
चितवन निकुञ्जलगायत देशका विभिन्न निकुञ्ज एवम् आरक्षमा रहेका सिमसार क्षेत्रमा शनिवारदेखि पानी चरा (जलपक्षी) को गणना सुरु भएको छ। जल क्षेत्रमा पाइने चराको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन चरा गणना गर्न थालिएको चरा विज्ञ डा. हेमसागर बरालले बताउनुभयो। करिब 300 प्राविधिक र चराविज्ञहरुको सहभागितामा दुई हप्ता लगाएर चरा गणना गर्न लागिएको डा बरालले बताउनुभयो। पहिलो दिन चितवन निकुञ्ज, जगदीशपुर जलाशय र कोसीटप्पुबाट गणना थालिएको हो।
गणनामा चराको अवस्था, वासस्थान र लोपोन्मुख स्थितिको अध्ययन गरिनेछ। यसपटक मुख्यगरी पोखरा, कोसी, चितवन, बर्दिया, शुक्लाफाँटा, लुम्बिनी, रारा, घोडाघोडी ताललगायत 60 स्थानमा गणना हुनेछ।
नेपालमा हालसम्म 875 प्रजातिका चरा भेटिएका छन्। यी मध्ये करिब 550 प्रजाति चितवनमै पाइन्छन्। केही चरा भने लोपोन्मुखको सूचीमा रहेको डा. बराल बताउनुहुन्छ। करिब 200 प्रजातिका चरा सिमसारमा पाइन्छन्। अघिल्लो गणनामा नेपालमा 44 हजारभन्दा बढी चरा फेला परेको थियो। गरुड, फ्यालफ्यालेलगायतका चरा लोप हुने अवस्थामा रहेकाले संरक्षणको खाँचो रहेको चरा विज्ञहरुले बताएका छन्।
चितवनका चरा विज्ञ वासु बिँडारीले निकुञ्जमा अन्य जनावर जस्तै चराका पनि खास पर्यटक भएकाले उत्तिकै महत्वका साथ हेरिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। पक्षी संरक्षण सङ्घको तथ्याङ्कमा नेपालमा 159 प्रजातिका चरा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको उल्लिखित छ। तीमध्ये अधिकांश पानी चरा छन्।
चरा गणनामा निकुञ्ज विभाग, विश्व वन्यजन्तु कोष, प्रकृति संरक्षण कोष, बर्ड एजुकेसन सोसाइटीलगायत दर्जनौँ सङ्घसंस्थाले सहयोग गरिरहेको गोरखापत्र अनलाईनले जनाएको छ।